အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Feb 29, 2012
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, February 29, 2012 Wednesday, February 29, 2012 Labels: စိတ်ခွန်အားဖြည့်စာစုများ , နှစ်သက်မိသော စာစုများ
အသက် အတော်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဟာ အေးစက်မှုန်မှိုင်းနေတဲ့ လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်း လေး တစ်ခုပေါ်မှာ ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ မုတ်ဆိတ် ပါးသိုင်းမွေး ပရဗျစ်၊ စုတ်ပြဲညစ်နွမ်းနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ထိုင်နေတဲ့ သူ့ကို လမ်းသွား လမ်းလာ လူတွေက သာမန်ကာလျှံကာ ကြည့်သွားကြရုံက လွဲလို့ဘယ်သူကမှ အရေးတယူ မရှိကြပါ။ ဟုတ်ပါတယ်လေ အိမ်မရှိ ယာမရှိ တောင်းရမ်းစားသောက်နေတဲ့ သူ့လိုလူ တစ်ယောက်ကို ဘယ်သူကများ ဆေးဖော်ကြောဖက် လုပ်ချင်ပါ့မလဲ။ ရေခဲလုမတတ် အေးချမ်းလွန်းတဲ့ ခုလိုချိန်မျိုးမှာ စုတ်ပြဲနေတဲ့ သူ့ကုတ်အင်္ကျီ အဟောင်းလေး ထက်စာရင် နွေးနွေးထွေးထွေး ထူထူထဲထဲရှိမဲ့ အင်္ကျီမျိုးက သူ့အတွက် သိပ်ကို လိုအပ်နေမှာတော့ အမှန်ပါ။
ဒီအချိန်လေးမှာ အသက် ၃၅နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ပလက်ဖောင်းလေးအတိုင်း လမ်းလျှောက် လာနေပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ် လျှောက်လာရင်းနဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ထိုအဖိုးအို အနားကို အရောက်မှာ ခြေစုံရပ်တန့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ကာ “ ဦးလေး.. ရှင်နေကောင်းရဲ့လား” လို့ နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ချမ်းချမ်းသာသာ အထက်တန်း လွှာထဲက ဖြစ်မယ်ဆိုတာ အဖိုးအိုက သိလိုက်ပါတယ်။ သူမဟာ လှပသစ်လွင်တဲ့ ထူထူထဲထဲ ကုတ်အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင် ထားပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်လို့နေပါတယ်။ ပြီးတော့လဲ သူမကို ကြည့်ရတာ ငတ်မွတ်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်း ဆိုတာကို ဘယ်သောအခါမှ ခံစားခဲ့ရဖူးပုံ မပေါ်ပါ။ ဒီလို အမျိးသမီး တစ်ယောက်က သူနဲ့ လာပြီး စကားပြောဆို ပတ်သက်ဖို့ဆိုတာ အကြောင်းကို မရှိဘူးလို့ သူကထင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးဟာလည်း တစ်ခြား လမ်းသွား လမ်းလာတွေလိုဘဲ သူ့ကို ရယ်စရာလုပ်ဖို့ စနောက်ဖို့ သက်သက်နဲ့ စကားလာပြောနေတာသာ ဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ အမျိုးသမီးကို “ ခင်ဗျား ကိုယ့်လမ်းကို သွားပါ။ ကျုပ် တစ်ယောက် တည်း အေးအေး နေနေတာကို မနှောက်ယှက်စမ်းပါနဲ့ ” လို့ အော်ဟစ်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။
အံ့သြစရာက ထို အမျိုးသမီးဟာ သူ့ရဲ့ အော်ဟစ်သံကို ကြောက်လန့်ပြီး ထွက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ နေရာမှာ ဆက်ပြီး ရပ်နေတုန်းပါ။ ညီညာပြီး ဖြူဖွေး လှပနေတဲ့ သွားတွေကို ပေါ်အောင် ပြုံးလိုက်ရင်းက “ ရှင် ဗိုက်ဆာနေသလား ” လို့ သူ့ကို မေးပြန်ပါတယ်။ “ မဆာပါဘူး ကျုပ်က သမ္မတကြီးနဲ့ အတူတူ ညစာစားပြီးပြီ ခင်ဗျားသာ ခုချက်ခြင်း ဒီကထွက်သွားစမ်းပါဗျာ ” လို့ သူက စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရွဲ့ပြီး ပြန်ဖြေ လိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးဟာ သူ့အနားက ထွက်ပြီး မသွားသလို အပြုံးလဲ မပျက်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူ့ဘေးနား ထိုင်ချလိုက်ပြီး အဖိုးအိုရဲ့လက်မောင်းတွေကို အသာအယာ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ချိန်မှာတော့ “ ဟာ ခင်ဗျား ဘာလုပ်တာလဲ ကျုပ်ပြောပြီးပြီလေ။ ကျုပ်ကို မနှောက်ယှက်ပါနဲ့။ ခင်ဗျား ဒီနေရာက ထွက်သွားပါ” လို့ အဖိုးအို ဆီက ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်သံက ဟိန်းထွက်လာပေါတော့တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ရဲအရာရှိ တစ်ယောက် ရောက်လာပြီး “ အစ်မကြီး ပြဿနာ တစ်ခုခု ဖြစ်နေသလား.. ကျွန်တော် ဘာများ ကူညီပေးရပါမလဲ ” လို့ မေးလာတော့ အမျိုးသမီးက “ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး ရဲအရာရှိကြီးရယ်။ ဒီလူကို မတ်တပ်ရပ်နိုင်အောင် ကျွန်မ ကြိုးစားနေတာပါ။ ကျွန်မကို တစ်ဆိတ်လောက် ကူညီပေးပါလားရှင်.. ” ရဲအရာရှိဟာ သူ့ခေါင်းကို ကုတ်လိုက်ရင်း “ ဒီအဖိုးကြီး ဂျက် ဟာ ဒီနေရာမှာ နေလာတာ နှစ်တော်တော် ကြာပါပြီ၊ သူဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှတော့ ဒုက္ခ မပေးခဲ့ပါဘူး၊ သူ့ကို ဘာများလုပ်မလို့ပါလဲ ” လို့မေးလိုက်ပါတယ်..
“ရှင် ဟိုနားက ကော်ဖီဆိုင်လေးကို တွေ့တယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်မ သူ့ကို အဲဒီဆိုင်လေးထဲကို ခေါ်သွားပြီး တစ်ခုခု ကျွေးချင်တယ်။ ပြီးတော့လဲ ဒီလောက်ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ကနေ ခနလေးဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို လွတ်မြောက်စေချင်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး နေစေချင်ပါတယ် ”
“ ခင်ဗျား ရူးနေသလား ကျုပ် အဲဒီအထဲကို မသွားချင်ဘူး ” အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်နေရင်းမှာဘဲ သန်မာတဲ့ လက်နှစ်ဖက် တွေနဲ့ သူ့ကို ဆွဲထူမခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ “ ရဲအရာရှိကြီး ကျုပ်ကိုလွှတ်ပါဗျ.. ကျုပ်အေးအေး ဆေးဆေး နေပါရစေ၊ ကျုပ်ဘာအမှားမှလဲ လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး ” လို့ ဆိုင်ကို ဆွဲခေါ်လာတဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း အဖိုးအို ဂျက်ဟာ အော်ဟစ်ရုန်းကန် နေတုန်းပါဘဲ။
“ ခင်ဗျားအတွက် အကောင်းဆုံး အခြေအနေကို ဖန်တီး ပေးတာနေတာကို မမိုက်မဲချင်စမ်းပါနဲ့” ရဲအရာရှိက လေသံခပ်မာမာနဲ့ သူ့ကို ပြန်ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသမီးကြီးနဲ့ ရဲအရာရှိဟာ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ သူ့ကို ကော်ဖီဆိုင်လေးထဲကို ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်လာနိုင်ခဲ့ပြီး ဆိုင်ရဲ့ အတွင်းဘက် ခပ်ကျကျ ကောင်တာ အနီးမှာထိုင်စေလိုက်ပါတယ်။ အချိန်က မနက်စာ စားချိန်ကျော်သွားပြီး နေ့လည်စာစားချိန်လဲ မရောက်သေးတဲ့ အတွက် ဆိုင်အတွင်းထဲမှာတော့ လူသူ ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ ဆိုင်ရဲ့ မန်နေဂျာဖြစ်သူဟာ စားပွဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ စားပွဲမှာ လာရပ်ပြီး မေးပါတယ်။
“ ရဲအရာရှိ ခင်ဗျာ.. ဘာများဖြစ်လို့ပါလဲ.. ဒီအဖိုးကြီးက ခင်ဗျားတို့ကို ဒုက္ခများပေးနေလို့လား ”
“ ဘာမှ ဒုက္ခ မပေးပါဘူး။ သူ့ကို ဒီအစ်မကြီးက အစားအသောက် ကျွေးမွေးချင်လို့ ခေါ်လာတာပါ.. ” ရဲအရာရှိရဲ့ စကားအဆုံးမှာ “ အိုး ဒီနေရာဟာ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ သင့်တော်တဲ့နေရာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ဟာ လူကြီးလူကောင်းတွေ ၀င်ထွက်သွားလာ စားသောက်တဲ့ ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပေါ်က ဒီလို စုတ်ပြတ်ပြတ် လူတစ်ယောက်က ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ထဲမှာ လာစားနေတာ သူများတွေ တွေ့သွားရင် ဆိုင်နာမည်ပျက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ စီးပွားရေးကို ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။” လို့ ဆိုင်မန်နေဂျာက ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ ကဲ အမျိုးသမီး ခင်ဗျားတွေ့တယ် မဟုတ်လား။ ကျုပ်ပြောခဲ့သားဘဲ .. ဒီလိုနေရာကို ကျုပ်မလာချင်ပါဘူးလို့.. ကျုပ်သွားတော့မယ်၊ ဒီလိုနေရာမျိုးကိုလဲ ဘယ်တော့မှ ထပ်မလာဘူး.. ” အဖိုးအို ဂျက်က သွားတစ်ချောင်းမှ မရှိတော့တဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖွင့်ဟရင်း ဒေါသဖြစ်စွာ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးဟာ ဆိုင်ရဲ့ မန်နေဂျာကို သေချာကြည့်လိုက်ပြီး ပြုံးပြလိုက်ရင်းက “ မန်နေဂျာ.. ရှင် ဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အက်ဒီဂရုပ်ရဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းစုကြီးကို သိတယ် မဟုတ်လား. ” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆိုင်မန်နေဂျာက စိတ်မရှည်တဲ့လေသံနဲ့ “ သိပါတယ်.. သူတို့ဟာ အပတ်စဉ်တိုင်း ကုမ္ပဏီ အစည်းအဝေးကို ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ အထူးခန်းမှာ အမြဲ လုပ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ ” လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။
အမျိုးသမီးက “ ဒါဆိုရင် ရှင်တို့ဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ အပတ်စဉ် အစည်းအဝေးကြောင့် ရှင်တို့ဆိုင်ရဲ့ အစားအသောက်တွေ ပိုပြီး ရောင်းခဲ့ရတဲ့ အတွက် သူတို့ဟာ ရှင်တို့ဆိုင်ကို တစ်ဘက်တစ်လမ်းက အကျိုးပြုနေတယ် ဆိုတာတော့ ရှင်လက်ခံတယ် မဟုတ်လား.. ”
“အဲဒီကိစ္စ ခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်.. ” မန်နေဂျာက ဒေါသထွက်လာပုံ ရတဲ့ လေသံနဲ့ ပြန်ပြောပါတယ်။
“ကျွန်မက အဲဒီ ဘဏ်လုပ်ငန်းစုရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် မစ္စ ပင်နီလုပ် အက်ဒီ ပါ.. ”
“ဗျာ…. ” အမျိုးသမီးရဲ့ နာမည်လည်း ကြားလိုက်ရော မန်နေဂျာရဲ့ အမူအယာက ချင်ခြင်းဘဲ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်.။
အမျိုးသမီးက နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ပြုံးလိုက်ရင်း “ကျွန်မက ခါတိုင်းလုပ်တဲ့ အဲဒီပွဲနဲ့ မတူတဲ့ စားသောက်ပွဲလေး တစ်ခုကို အခုချက်ခြင်း ကျင်းပချင်ပါတယ်။ ရှင်တို့ဆိုင်ရဲ့ အကောင်းဆုံး စားသောက်စရာတွေ ယူလာခဲ့ပါ.. ”
စားပွဲမှာ ရပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ရဲအရာရှိကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး “ ရဲအရာရှိကြီးကိုလည်း ကျွန်မတို့နဲ့အတူတူ စားသောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.. ”
“တော်ပါပြီခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါ.. ကျွန်တော်က တာဝန်ချိန်တွင်း ဖြစ်နေတဲ့အတွက် စားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး”
“ဒါဆိုရင် အပြန်ကို ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်တော့ ယူသွားပါရှင်.. ”
“ကောင်းပါပြီဗျာ .. ကော်ဖီတော့ ယူသွားပါ့မယ်.. ”
ရဲအရာရှိစကား အဆုံးမှာ မန်နေဂျာက
“ကျွန်တော် ရဲအရာရှိ ယူသွားဖို့အတွက် ကော်ဖီ တစ်ခွက် ယူလာပေးပါ့မယ်.. ဒီဝိုင်းအတွက်လဲ အကောင်းဆုံး အစားအသောက်တွေကို ယူလာခဲ့ပါ့မယ် ခင်ဗျာ ” လို့ပြောပြီး မန်နေဂျာက စားပွဲကနေ ထွက်ခွာသွားပါတယ်။
မန်နေဂျာ ပြန်ထွက်သွားတာကိုစောင့်ပြီး ရဲအရာရှိက အမျိုးသမီးကို “ ခင်ဗျား သူ့ကို လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးလိုက်တာဘဲ ” လို့ လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်..
“ ကျွန်မ ဒီလိုတော့ မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ထုတ်မပြောရင် မဖြစ်တော့တာမို့ ထုတ်ပြောလိုက်ရတာပါ။ ကျွန်မ အနေနဲ့ အန်ကယ် ဂျက် ကို ဒီခေါ်လာတာ အကြောင်း အများကြီး ရှိပါတယ်..” လို့ ပြောလိုက်ပြီး အမျိုးသမီးဟာ ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်. ထို့နောက် အဖိုးကြီးဘက်ကို လှည့်ပြီး စကား စတင်ပြောပါတယ်။
“ အန်ကယ် ဂျက်... ရှင်ကျွန်မကို မှတ်မိလား.. ”
အဖိုးအို ဂျက်ဟာ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ မျက်နှာကို သေသေချာချာ စူးစမ်းစွာကြည့်နေပြီး “ ကျုပ်ထင်တာ ခင်ဗျားဟာ ကျုပ်ကို ရင်းရင်းနှီးနှီး သိနေပုံဘဲ”
“ဟုတ်ပါတယ် .. ကျွန်မရုပ်ရည်က ဟိုတုန်းကထက် ရင့်ရော်သွားခဲ့ပါပြီ.. အခုအချိန်မှာ ငွေကြေးဥစ္စာ အရာရာ ပြည့်စုံကောင်း ပြည့်စုံနေပြီလို့ ဆိုနိုင်ပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ ငယ်စဉ်ကာလ ရှင် ဒီဆိုင်မှာ အလုပ် လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တွေ၊ အေးခဲနေတဲ့ ခုလိုရာသီမျိုးမှာ ဆာလောင်ငတ်မွတ်စွာနဲ့ လမ်းတကာ လျှောက်ပြီး အစားလေး တစ်လုပ်အတွက် ဆိုင်တွေဆီမှာ အလုပ်တောင်းခဲ့ရဖူးတဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူးရှင်…”
ဘေးနားက နားထောင်နေတဲ့ ရဲအရာရှိထံမှ အံ့သြတကြီး လေသံက လွှတ်ခနဲ ထွက်ကျလာပါတယ်.. ဒီလို ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာနဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ လျှောက်သွားခဲ့ ဖူးတယ် ဆိုတာကို သူဘယ်လိုမှ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပုံ မရပါ။
အမျိုးသမီးက သူ့ဘဝနောက်ကြောင်းကို စတင်ပြီး ရှင်းပြပါတယ်။ “ ကျွန်မဟာ အဲဒီအချိန်က ကောလိပ်ကျောင်းက ထွက်လာကစ ဒီမြို့ကလေးကို အလုပ်ရှာဖို့ ရောက်လာပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးချင်တော့ အလုပ် တစ်ခုတလေမှကို တော်တော်နဲ့ ရှာလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း အလုပ် မပေးခဲ့ကြပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ လက်ထဲမှာ ပြားစေ့လေး နည်းနည်းကလွဲလို့ ဘာမှ မကျန်တော့တဲ့အခါ အခန်းငှားခ မပေးနိုင်တော့တဲ့ ကျွန်မကို အခန်းပိုင်ရှင်က မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ ပြင်းလွန်းတဲ့ အအေးဒဏ်အောက်မှာ ခိုနားရာမရှိ၊ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ် ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ လျှောက်သွားနေခဲ့ရင်း နောက်ဆုံးမှာ ဒီနေရာလေးကို စားစရာ တစ်ခုတလေ ရလို ရငြား ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။”
အဖိုးကြီးဂျက်ဟာ ပါးစပ်ကို ဟလိုက်ပြီး “ အိုး ကျုပ်မှတ်မိပြီ။ အဲဒီတုန်းက ကျုပ်ဟာ ဟိုနားက ကောင်တာမှာ ရပ်နေခဲ့တာလေ။ ခင်ဗျားက ကျုပ်ကိုမေးတယ်.. အစားအသောက် နည်းနည်းပေးပါ.. ဆိုင်မှာရှိတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပေးပါ့မယ်လို့ တောင်းဆိုတယ်လေ။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ အပြင်လူကို အလုပ်ခိုင်းတဲ့အချက်ဟာ ဆိုင်ရဲ့ စည်းကမ်းချက်ကို ဖောက်ဖျက်ရာ ကျတဲ့အတွက် အလုပ် မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ ကျုပ်က ပြောခဲ့တယ်လေ။ ”
“ဟုတ်ကဲ့ .. ကျွန်မသိပါတယ် အန်ကယ်ဂျက်။ အန်ကယ်ဟာ ကျွန်မ တစ်သက် မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အသားညှပ် ဆင်းဝစ်ကြီးတစ်ခုနဲ့ ကော်ဖီ တစ်ခွက်ကို ပေးပြီးတော့ ဟိုထောင့်နားက စားပွဲမှာ သွားထိုင်စားပါလို့ ပြောခဲ့တယ်. ကျွန်မက ရှင် ကျွန်မကြောင့် ပြဿနာတစ်ခုခု ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေခဲ့ပေမဲ့ ရှင်က ကျွန်မစားတဲ့ အစားအစာအတွက် ကျသင့်ငွေကို ကောင်တာမှာ သွားရှင်းနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒီတော့မှ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာ သိမှ စိတ်ချလက်ချနဲ့ အစားကို စားနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မဘဝမှာ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆာဆာနဲ့ စားခဲ့ရတဲ့ ဆင်းဒဝစ်လောက် ဘယ်အစားအသောက်ကမှ အရသာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခုချိန်ထိလည်း သတိရနေပါတယ်။”
“ခင်ဗျား ဒီနောက်ပိုင်း အလုပ်ရသွားခဲ့သလား.. ” အဖိုးဂျက်က အမျိုးသမီးကြီးကို မေးလိုက်ပါတယ်..
“ဟုတ်တယ် သိပ်မကြာခင်မှာ ကျွန်မဟာ အလုပ်တစ်ခုကို ရလိုက်တယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ သူများတွေထက်ပိုပြီး အလုပ်မှာ စေတနာထားတယ်။ ကြိုးစားတယ်။ ကျွန်မက ငတ်ပြတ်တဲ့ ဘ၀ကို ရောက်ခဲ့ဖူးတော့ ဒီဘဝကို ပြန် မသွားချင်ဘူးလေ. ဒီတော့ ဘာလုပ်သလဲ... သူများထက် ပိုကြိုးစားရတာပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ ဇွဲ၊လုံ့လ အကျိုးကြောင့် အချိန်နည်းနည်း ကြာတဲ့အခါ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း တစ်ခုကို ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ကံတရားရဲ့ ဖေးမမှုလဲ ပါတာပေါ့လေ။ ” စကားပြောရင်း အမျိုးသမီဟာ သူမရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့ လိပ်စာကဒ်ပြားလေး တစ်ခုကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး
“အန်ကယ်ဂျက်.. ရှင် ဒီမှာ စားသောက်ပြီးစီးတဲ့အခါ ဒီလိပ်စာလေးအတိုင်း ရောက်အောင်သွားပြီး ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိနဲ့ သွားတွေ့စေချင်တယ်.. ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီမှာ အန်ကယ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အလုပ်တစ်နေရာကို သူ စီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်.. ပြီးတော့ အ၀တ်အစားဝယ်ဖို့၊ နေထိုင် စားသောက်ဖို့ ငွေတစ်ချို့ကို သူ ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်၊ အန်ကယ် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ တစ်နေ့အထိ ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ အန်ကယ် ဘယ်လို အကူအညီဘဲ လိုလို ကျွန်မဆီ လာခဲ့ပါ။ ကျွန်မ အန်ကယ်အတွက် အမြဲတမ်း တံခါးဖွင့်ထားပါတယ် အန်ကယ်ဂျက်.. ”
အမျိုးသမီးရဲ့ စကားအဆုံးမှာ အဖိုးအို ဂျက်ရဲ့ ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာပါတော့တယ်။ “ခင်ဗျားကို ဘယ်လို ကျေးဇူးတင်ရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူးဗျာ” လို့ တုန်ယင်လှိုက်လှဲနေတဲ့ အသံနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကျေးဇူးတင်ဖို့ မလိုပါဘူး အန်ကယ် ဂျက်ရယ်။ ကူညီထိုက်သူကို ကူညီရတာ ၀မ်းမြောက်စရာပါ။ အန်ကယ်ရဲ့ ကူညီထောက်ထားတတ်တဲ့ စိတ်ထားလေးကို ကျွန်မဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။ အန်ကယ် ကျွေးခဲ့တဲ့ ဆင်းဒဝစ်နဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ ကျွန်မဘ၀မှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အရာတွေပါ… ဘယ်လိုမှ တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်မကို ခုလို သူတစ်ပါးကို ကူညီတတ်အောင် လမ်းစကို လမ်းပြခဲ့တဲ့သူကလဲ အန်ကယ်ဂျက် ကိုယ်တိုင်ပါ”
စားသောက်နေတဲ့ အဖိုးအိုဂျက်ကို နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် အမျိုးသမီးနဲ့ ရဲအရာရှိဟာ ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ထွက်လာ ကြပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့အရောက်မှာ တစ်ယောက်တစ်လမ်း ထွက်ခွာမသွားခင် ဆိုင်အဝနားမှာ ခေတ္တရပ်ပြီး အမျိုးသမီးဟာ ရဲအရာရှိကို ကျေးဇူးတင်စကား ဆိုပါတယ်။
“ ရှင့်ရဲ့ အကူအညီအတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ် ရဲအရာရှိမင်းရယ်.. ”
“အိုး ကျေးဇူးတင်ဖို့ မလိုပါဘူး မစ္စ အက်ဒီ.. ကျွန်တော်ကတောင် ကျေးဇူးတင်ရမှာပါဗျာ.. ကျွန်တော် ဒီနေ့ သိပ်ထူးဆန်း အံ့သြစရာ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်.. ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မဲ့ အဖြစ်အပျက်လဲ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ကျွန်တော့် ရင်ထဲကို တော်တော် ထိပါတယ်.. ခင်ဗျားရဲ့ ကော်ဖီအတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ မစ္စ အယ်ဒီ.. ”
ရဲအရာရှိရဲ့ လက်ထဲက ကော်ဖီခွက်ကို သတိရလိုက်မိတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ “အိုး ရှင် ကော်ဖီကို ဘယ်လို သောက်တယ် ဆိုတာ မေးဖို့ ကျွန်မ မေ့သွားတယ် အခု ယူလာတာ ကော်ဖီက အချိုပေါ့ ထင်တယ်။ နို့ ဖြစ်ဖြစ်၊ သကြားဖြစ်ဖြစ် ထပ်ယူမလား ” လို့မေးတော့ ရဲအရာရှိဟာ လက်ထဲက ကော်ဖီခွက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီတော့ ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့
ကျွန်တော့်အတွက် သကြားတွေ၊ နို့တွေ မလိုတော့ပါဘူးဗျာ၊ ဒီနေ့ အန်ကယ်ဂျက်ကို ခင်ဗျားပေးလိုက်တဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာတွေက သကြားတွေ နို့တွေထက် ချိုပါတယ်။ တန်ဖိုးလည်း ကြီးလှပါတယ်။ စေတနာ မေတ္တာတို့၊ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းတို့ဆိုတာ ဘယ်အရာနဲ့မှ မတူအောင် ချိုမြိန်လှပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာလည်း အဲဒီအချိုဓာတ်တွေ ကူးစက်ပြီး နောက်ထပ် ဘယ်လိုသကြားမှ မလိုတော့အောင် ပီတိတွေနဲ့ ချိုနေပါပြီဗျာ။
Kindness ( Unknown Author) ကို ဘာသာပြန်တာပါ။ ခုတလော စာအသစ် မရေးဖြစ်သေးတာကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က ရေးခဲ့တဲ့ ဒီပိုစ့်လေး ပြန်တင်ဖြစ် တာပါ။ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပြီး ဖတ်ရှုပေးကြပါလို့ တောင်းပန် ချင်ပါတယ်။ ဒီစာထဲကလို စေတနာ မေတ္တာ အပြည့်နဲ့ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းက သကြားထက်ကို ချိုမြိန် လှပါတယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့လဲ သကြားထက် ချိုမြိန်တဲ့ အရာတွေကို ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါဦးစို့လားနော်။
Links to this post 17 comments